Arimaha Bulshada |
Sannad walba xilligaan oo kale magaalada Columbus Gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka waxaa lagu qabtaa xaflad loogu talo galay ardada dhamaysatay dugsiyada Sare iyo kuliyadaha kala geddisan ee gobolka Ohio. Xafladan oo ay qeybaha bulashada, madaxda gobolka iyo ardada intuba ka soo qeybgalaan waxaa soo abaabulay isla markaana soo waday mudo 7 sano ah Hay’ada SomaliCAN,…
July 12, 2016 in Arimaha Bulshada, Wararka Maanta.
Bukaanno ku dhow 80 qof oo uu soo ritay cudurka shuban-biyoodka ayaa lagu daweynayaa isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne. Bukaannada oo isugu jira carruur iyo dad waaweyn ayaa afartii maalmood ee la soo dhaafay laga kala keenay xaafadaha magaaladaas, sida uu sheegay Dr. Khadar Cabdullaahi oo ah madaxa qeybta gargaarka degdegga ah ee isbitaalka Beledweyne.…
July 10, 2016 in Arimaha Bulshada, Wararka Maanta.
Xulka Soomaaliya ayaa guuldaro ka helay dhigiisa Niger kulan ka tirsan isreeb-reebka koobka Aduunka 2018 ee wadamada Afrika. Kulanka wuxuu ka qabsoomay garoonka Adis Ababa Stadium ee dalka Ethiopia oo minan u ahaa xulka qaranka Soomaaliya waxaana lagu suldaaray (2-0). Qeybta hore ciyaarta waxey ku dhamaatay barbaro gool la’aan ah balse markii la isku soo…
October 9, 2015 in Arimaha Bulshada, Wararka Maanta.